FBI oo qabatay nin lagu xiriirinayo inuu Madaxweyne Obama usoo diray Bashqad Sumeysan – idalenews.com
Ciiddamo Khaas ah oo ka tirsan Waaxda Dambi barista Maraykanka (FBI), waxay shalay galab gacanta ku dhigeen nin lagu magacaabo Paul Kevin Curtis, kaasi oo la rumeysan yahay inuu Mas’uul ka ahaa Saddax Warqadood oo Bashqadeysan oo loo soo diray Madaxweyne Obama.
Tijaabo lagu sameeyay Warqadaha Obama loo soo diray, ayaa la ogaaday inay ahaayeen kuwo sumeysa, oo lagu soo shubay Buddo Kiimikada (Ricin) taasi oo ah Sun Khatar leh oo wax u dhimi karta tayada murqaha Aadanaha.
Warar horay usoo baxay ayaa lagu sheegay in Warqado loo soo kala diray Madaxweyne Obama iyo Senator Roger Wicker oo ka tirsan Xisbiga Jamhuuriga aysan marnaba warqadahaasi soo gaarin iyaga.
Bashqadaha ayaa waxaa dusha sare lagu saxiixay Erayo la micna ah ‘’Aniga waxan ahay KC iyo Waxan cadeynayaa Fariimahan’’.
Eedeysanaha Paul Kevin Curtis, ayaa laga soo qabtay gurigiisa oo ku yaalla Corinth, Mississippi, waxayna FBI sheegen inuu kiiskan wax xiriir kulaheyn Qaraxyadii lala beegsaday Tartankii Oradka ee ka dhacay Magaaladda Boston, kaasi ay ku geeriyoodeen Saddax qof.
Haddal ka soo baxay Waaxda Sirdoonka Maraykanka ayaa lagu sheegay in Warqada loo soo diray Obama la marsiiyay Scan, lana ogaaday inay Bashqada ku jiraan Buddo sumeysan.